Raw Flibanserin HLP (147359-76-0) mpanamboatra - Phcoker
SKU: 147359-76-0 Sokajy: Sex Hormone
Raw Flibanserin HCL poopy (147359-76-0) video
Raw Flibanserin HCL poopy (147359-76-0) Specifications
Product Name Flibanserin hydrochloride poids
Anarana simika UNII-96XTC36K1B, 96XTC36K1B
Drug Class Mpanohitra maromaro mpanohitra marobe serotoninina (MSAA)
molekiolan'ny Formula C20H22ClF3N4O
molekiolan'ny Wvalo 426.8630896
mitsonika Point > 225 ° C (dec.)
Ny antsasaky ny biolojia 11 ora
Solubility DMSO (Tsotra), Methanol (Tsotra)
Application Nivelatra ho amin'ny fikarakarana ny tsy fahampian-tsakafo ara-pananahana amin'ny vehivavy.
Raw Flibanserin HCL poopy (147359-76-0) Description
Flibanserin hydrochloride no zava-mahadomelina voalohany nankatoavina noho ny fikorontanan'ny fanavakavahana ara-nofo (HSDD) ao amin'ny vehivavy premenopausal an'ny FDA tamin'ny volana Aogositra 2015. Tany am-boalohany dia novolavolaina toy ny fanafody antidepressant an'ny Boehringer Ingelheim, saingy nampiseho ny tsy fahampian'ny fahaverezan'ny fitsapana ary dia novolavolaina ho rongony fanodikodinam-pihetseham-po mahatsiravina nataon'ny Sprout Pharmaceuticals. Ny hetsiky ny hetsika Flibanserin dia mifandraika amin'ny fiaraha-miasan'ny 5-HTA1 sy 5-HTA2, mampiseho ny asa agonista ao amin'ny 5-HTA1 sy mpanohitra ao amin'ny 5-HTA2, ka nahatonga ny fihenan'ny serotoninina ao amin'ny atidoha ary koa ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny norepinephrine ary dopamine neurotransmitters.
Flibanserin hydrochloride poids (147359-76-0) Mechanism of Action
Flibanserin hydrochloride dia miasa amin'ny trondro telo lehibe amin'ny atidoha: dopamine, norepinephrine, ary serotonine. Ireo zavatra simika ireo dia ny neurotransmitters. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fandefasana famantarana eo amin'ny atidoha sy ny ampahany hafa amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny rafi-pitabatabana.
Dopamine sy norepinephrine dia tafiditra amin'ny fientanam-piraisana ara-nofo. Na izany aza, ny serotonin dia manampy amin'ny faniriana ara-nofo ary mety hanamaivana ny firaisana ara-nofo. Heverina fa raha tsy misy ny fandanjana ireo chimika ireo - raha toa ka ambany loatra ny dopamine sy ny norepinephrine ary ny serotonin dia avo avo loatra - ny vehivavy dia mety mahatsapa faniriana tsy ara-nofo.
Flibanserin hydrochloride dia miasa amin'ny fampiakarana ny dopamine sy ny norepinephrine raha toa ka mihena ny serotonin. Amin'izany fomba izany dia mihamitombo ny zavatra simika izay manampy amin'ny faniriana ny faniriana hanao firaisana ara-nofo ary ny iray izay afaka manafoana ny faniriana.
Fampiharana ny poofa HCL Flibanserin (147359-76-0)
Flibanserin hydrochloride dia agonist 5-HT1A ary mpanohitra 5-HT2A izay novolavolaina mba hanasitranana ny fikorontanan'ny fanavakavahana ara-nofo amin'ny vehivavy (1,2).
Ny vokatry ny Flomanserin hydrochloride poids (147359-76-0)
Ny fisehoan-javatra mampidi-peo dia mahazatra kokoa amin'ny vehivavy manao flibanserin. Ny ankamaroan'ireo tranga ratsy dia mora tamin-katsaram-panahy. Ny trangan-javatra ratsy be dia be dia be dia be koa ny fahanginana, ny hafanana, ny reraka, ny torimaso, ary ny tsy hatory.
Ny fisotroana alika raha eo amin'ny flibanserin dia mety miteraka herin'ny tsindry ambany (ambany ny tosidra izay nahatonga ny soritr'aretina taorian'ny famokarana divay 2 natao tamin'ny 17%).